Roobab mahiigaan ah: waxa ay yihiin, sida ay u dhismaan iyo cawaaqib xumadooda | Saadaasha Shabakadda
Roobab mahiigaan ah
Sidaan ognahay, roobku waa dhacdo caadi ku ah saadaasha hawada ee dhulkeena. Ma aha wax ka badan dhicitaanka walxaha biyaha ee sheyga qaabka dareeraha ah ee uumiga iyo qaboojinta uumiga biyaha ee daruuraha ku yaal dusha sare ee troposphere. Mararka qaarkood waxaan ugu magac darnay roobka magaca roobka, in kasta oo tan loola jeedo qayb ballaadhan. Jiilka roobka wuxuu kuxiranyahay dhowr arrimood: heerkulka, cadaadiska jawiga iyo huurka. Ku Roobab mahiigaan ah waa kuwa ku dhaca xoog badan iyo muddo gaaban. Waxaa jira su’aalo badan oo ku saabsan roobka noocan ah iyo sida uu u bilaaban karo.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeynaynaa si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato roobabka mahiigaanka ah, astaamahooda iyo sida ay u samaysmaan
1 Asalka roobka
2 Abuuritaanka roobab mahiigaan ah
3 DANA waxay sababtaa roobab mahiigaan ah inay samaystaan
Si loo ogaado astaamaha iyo asalka roobka mahiigaanka ah, waa inaan fahanno sida roobku u bilowdo. Roobku waa wax aan ka badnayn oo waa qayb ka mid ah wareegga biyaha ee ay dhibcaha biyuhu soo da'aan oo horay looga sameeyay badweynta, wabiyada, harooyinka iyo dusha sare ee dhulka ay biyuhu ku yaalliin.
Roobku wuxuu sameeyaa inta udhaxeysa noocyada kala duwan noocyada daruuraha sida cumuloninbus iyo nimbostratus. Kuwani waa daruuraha ka hela inta badan qoyaanka jawiga. Marka uumiga biyuhu kaco oo uu gaaro meelaha sare, badanaa waa gobollo qabow. Tani waxay u keentaa uumiga isku soo ururaya iyo sameynta dhibcaha biyaha oo ay ugu mahadcelinayaan nukliyeerka uumiga 'hygroscopic'. Nuclei-kan uumiga ahi wuxuu noqon karaa dhibco boodh ah ama walxo la hakiyey oo laga helo jawiga. Markay ururayaan waxay gaarayaan culays ay ku dhammaystiraan culeyska culeyska culeyska.
Sameynta roobku waxay ku dhici kartaa 3 siyaabood:
Qubayska Wadada waa noocyada roobabka ee hawada kulul ay taabato dhulka dushiisa oo lagu kululeeyo ficilka qorraxda. Mar hadday hawada ka kacdo, way qabowdaa oo roobabku waxay dhacaan roobka oo u ururay dhibcaha dhibcaha awgood.
Roobabka oraafiga: waa kuwa la sameeyo marka tiro hawadeed oo qoyan ay isku dhacaan gargaar buuraley ah. Hawadaani waxay u janjeeraa inay kor u kacdo oo ay ka baxdo qoyaankeeda oo dhan ilaa ay gebi ahaanba ka soo degto iyadoo u qallalan dhinaca kale ee buurta.
Qubeyska hore: Waxay ka dhasheen isku dhaca laba hawo oo qoyan oo leh heerkullo kala duwan. Caadi ahaan badanaa waa mid tayo leh iyo mid kale oo qabow. Roobabkani badanaa waa nooc duufaan ama duufaanno ah.
Roobab mahiigaan ah: waxaa sameeya isbarbardhiga heerkulka iyo dusha sare ee dhulka. Badanaa waxay dhacdaa dhamaadka xagaaga waana duufaano xoog badan oo inta badan sababa dhaawac culus, gaar ahaan beeraha.
Abuuritaanka roobab mahiigaan ah
Dad badan ayaa layaaban sababta ay roobab mahiigaan ahi u da'ayaan dhammaadka xagaaga. Waa wax iska caadi ah in maalmaha ugu dambeeya ee Agoosto ay jiraan duufaanno ka socda qayb wanaagsan oo ka mid ah waddankeenna. Waana tan asalka roobabkan mahiigaanka ah ay ugu wacan tahay xasillooni darro. Deganaansho la'aantu waxay caadiyan ku urursan tahay koonfur-bari jasiiradda roob aad u tiro badan oo ka badan 200 mm.
Dhacdooyinkan roobab mahiigaan ah ayaa badanaa iskood ahaan loogu yaqaan dhibic qabow. Waa cidlo ku dhowaad sannad kasta hareeraha badda Mediterranean iyo waqtigan. Waxay badiyaa ku kala duwan yihiin maalmaha ugu dambeeya ee Agoosto iyo toddobaadyada ugu horreeya ee Oktoobar. Caadi ahaan bisha Sebtember waa tan ugu badan ee abuuritaankooda. Dhammaan duufaannadan daran ee sida joogtada ah u dhaca isla taariikhdaas uma dhigmaan wax iska yimid, laakiin waxay la socdaan sababo xagga saadaasha hawada ah qaarkood.
Sababta ugu weyn ee asalka roobka mahiigaanka ah waa kala duwanaanshaha heerkulka. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa ah in kuleylka sare ee badda Mediterranean-ka ee dhammaadka xagaaga uu ka duwan yahay taariikhaha dusha sare ee jasiiradda. Dhamaadka xagaaga heer kulka bada Mediterranean-ka wuxuu kudhowaad yahay 27 darajo, in kastoo ay jiraan diiwaanno heer kulka ah oo gaarey 31 darajo.
Dhinaca kale, waa inaan maanka ku haynaa in xagaagu yahay waqtiga xasiloonida ugu weyn ee jawiga dalkeenna. Booqashada duufaanta bilaha xagaaga ma aha wax aad u badan. Si kastaba ha noqotee, dhamaadka waqtigan dabeylaha cirifka waqooyiga waxay bilaabaan inay soo kiciyaan oo yimaadaan inta lagu jiro bisha Sebtember.
DANA waxay sababtaa roobab mahiigaan ah inay samaystaan
Markaan tixraacno DANA macnaheedu waa niyad jab gooni ah oo heerar sare ah. Tani waxay u dhigantaa tan aan badanaa ugu yeerno jeebka hawo qabow dherer ahaan. Marka niyadjabkaan dhererkiisu ka kooban yahay hawo aad u qabow heerarka sare ee jawiga laakiin aan ku biirin hawada hawo dusha sare, Waxay ku taal agagaarka badda Mediterranean. Maaddaama aan halkan ku haysano heerkul aad u sarreeya, waa inta lagu jiro taariikhahaas, waxaan ku kala duwanaan weynnaa heerkulka u dhexeeya lakabyada kala duwan ee jawiga.
Farqiga u dhexeeya heer kulka ayaa tilmaamaya xasilooni darrada jawiga taas oo aan u aragno in cufnaanta hawadu kor ugu kacdo si fudud, si dhakhso leh ugu buuxsamaan uumiga biyaha markay la kulmaan hawo qabow oo ay ka dhashaan duufaanno xoog leh Sidaan ognahay, marka hawada kulul u kacdo dhanka sare ee jawiga waxaan helnaa isku xirnaan deg deg ah oo dhibcaha biyaha ah. Haddii uumintani ku dhacdo xawaare sare, duufaanku wuxuu noqon doonaa mid aad u xoog badan.
Marka lagu daro waxa aan soo sheegnay, haddii niyadjabkaan dhererkiisa la gaarsiiyo meesha saxda ah isla markaana uu gaaro tabarucaadda dabaysha qaybtaan, haddii aan ku darno waxa ka masuulka ah qadar badan oo qoyaan ah oo ka yimaada badda Mediterranean, Xaalad aan caadi ahayn oo roobab mahiigaan ah ayaa ka dhashay. Waa roobab ka badnaan kara 300 mm. Waxaa jira diiwaan la dhigay sanadkii 1987 ee gobolka La Safor oo leh roob da '500 mm oo ka dhashay roobab mahiigaan ah.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto roobabka mahiigaanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Roobab mahiigaan ah